Eric Fou Hehy : Mbola miandry ny fandidiana -
AccueilSongandinaEric Fou Hehy : Mbola miandry ny fandidiana
Eric Fou Hehy : Mbola miandry ny fandidiana
14/08/2018 admintriatra Songandina 0
« Tsy misy vaovao, vaovao tsara » araka ny oha-pitenenana vahiny. Efa ho iray volana izao no tonga any Inde i Eric sy ny andefimandriny hiatrika ny famindrana voa. Araka ny vaovao azo, dia mbola miandry ny fandidiana azy ity mpanao hatsikana, mpikambana ao amin’ny Fou Hehy ity. « Mbola tsy nandrenesam-baovao aloha hatreto fa izy efa tonga any Inde no vaovao azo farany », araka ny fanazavana nentin’i Honorat, avy amin’ny tarika Fou Hehy. Raha ny resaka fohy nifanaovana taminy tao amin’ny « facebook », dia mbola tsy fantatra ny andro sy ny fotoana hanatanterahana ny famindrana voa. Maro rahateo ireo fepetra samihafa takiana amin’ny fitsaboana toa izao, ary heverina fa mbola misy tsy feno ny fepetra matoa mbola tsy mandeha ny fandidiana azy.
Efa hatramin’ny volana mey no niditra hôpitaly, ary niatrika fitsaboana tetsy amin’ny HJRA Ampefiloha i Eric. Na tao anatin’ny tsy fahasalamana aza, dia tamin’ny endrika feno tsiky, toa ny nahafantarana azy hatramin’izay no nentin’i Eric nihazo an’ Inde hanaovana ny famindrana voa. Efa tsara fandraisana azy ihany koa ireo mpitsabo any an-toerana, ary nisy tamin’ireo malagasy monina any Dubai no tonga namangy azy.
Miray soa sy fahasalamana ho azy hatrany.
Manoloana ny savorovoro politika sy fikasana hamboly korontana ataon’ireo antoko politika roa, Tim sy Mapar, dia nanao fanambarana ny fokontany miisa 192 mandrafitra an’Antananarivo Renivohitra, omaly, tetsy amin’ny L’Astauria Antanimena. Noho izany indrindra, nitambatra ireo ...Tohiny